MW JDFI Oo Seexday Magaalada Qabridahar - Cakaara News
MW JDFI Oo Seexday Magaalada Qabridahar
Jijiga(CN) Axad, 1 November 2015, Madaxweynaha JDFI mudane Dr. Mulatu Tashome ayaa booqashadii Gobolka shabeele kadib xalay u dheelmaday guriga martida ee maamulka magaalada Qabridahar isagoo madaxweynuhu kulan balaadhan saaka kula qaatey Odayaasha, Hooyooyinka iyo Dhalinyarada hoolka shirarka ee magaalada Qabridahar.
Hadaba Madaxweynaha DDSI mudane Cabdi Maxamud Cumar oo furay kulanka ayaa kadib markuu ka warbixiyay booqashada madaxweynaha JDFI hadalka ku soo dhaweeyay marti sharafka khaaska ah mudane Dr. Mulatu Tashome.
Madaxweynaha JDFI mudane Dr. Mulatu Tashome ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay sida quruxda badan ee ay u soo dhaweeyeen shacabka Qabridahar isagoo si diirana ugu mahadceliyay shacabka iyo heerarka kala duwan ee maamulka. wuxuu intaa raaciyay in uu aad ugu faraxsan yahay inuu booqasho ku yimid deegaanka soomaalida itoobiya arkana horumarka balaadhan ee ka socda. wuxuuna hadal kooban ku yidhi"horumarka deegaanku gaadhay ee laxaadka leh wakhti gaaban gudihii waa mid ku dayasho mudan". waxaa intaa dheer oo uu sheegay madaxweynuhu in dadaalka horumarka deegaanku ku yimid iskaashiga shacabka, xukuumada DDSI iyo Dawlada dhexe. wuxuuna carabka kudhuftay, in booqashadiisu tahay bilow ee aysan dhamaad ahayn. wuxuuna hadalkiisa kusoo xidhay in sida caafimaadku u yahay waxa ugu muhiimsan ee shaqsigu kunoolaado ay nabadgelyaduna wadanka muhiim ugu tahay marka maadaama oo nabadgelyadii meel aad saarteen horumarkuna si laxaad leh usocdo in horumarka dhanka waxsoosaarka beeraha xooga lasaaro oo intaan kufilaano wadankeena aan caawino wadamada kale ee dhibaataysan si wadankeenuna uga mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay.
Sidoo kale, madaxwaynaha JDFI ayaa sheegay in marka lasoo hadal qaado khayraadka uu leeyahay deegaanka soomaalida lamoodi jiray oo kali ah geel iyo adhi laakiin hada la arkay khayraadyo wax haysta oo aan idinka ahayn uusan jirin sida sisinta, macdanta, dhulbeereedka iyo waxyaabo kale oo badan ra'yigaa horana maanta wuu isbadalay oo khayraadka deegaanka lama tirin karo isagoo sheegay in hada kahora ay kawada hadleen madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar in cudbi labeero qorshahana kujirto.
Dhanka kale Odayaasha, Hooyooyinka iyo Dhalinyarada ayaa dhankooda sheegay in ay aad ugu faanayaan Itoobiyaanimadooda oo xukuumadihii ka horeeyay Xisbiga EPRDF aynan u qirsanaan jirin in shacabka deegaanka soomaalidu yahay dad itoobiyaan ah. waxayna cadeeyeen in deegaanka soomaalidu uu horumar laxaad leh gaadhay oo kaliya shantii sano ee la soo dhaafay kadib markii ay nabadgalyada salka u dhigeen Ciidanka Difaaca Qaranka, Ciidanka Gaarka ah ee DDSI, Shacabka iyo Xukuumada oo iskaashanaya Dawlada Federalkuna garabtaagan tahay iyagoo mahadnaq balaadhana u soo jeediyay Ciidanka Difaaca Qaranka iyo Ciidanka Gaarka ah.
Ugudanbeyna, waxay sheegeen inay tahay taariikhda markii ugu horeysay ee madaxweynaha dalku yimaado deegaanka gaar ahaana u dhoxo qabridahar kadibna uu soo horfadhiisto shacabka iyagoo taasina farxad gaar ah utahay ayayna odoyaashu gudoonsiiyeen mudane Dr. Mulatu Tashome hadiyad dhaqameed qaali ah. waxayna bulshada qabridahar balanqaadeen inay hadh iyo habeenba ay garab taagnaanayaan hawlaha horumarka oo dhan siiba dadaalada dhanka wax soosaarka beeraha ay xukuumada DDSI iyo dawlada dhexeba ay gaar ahaan kawadaan deegaanka guud ahaana dalka si looga baxo saboolnimada wadankeenuna uga mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu xawliga usocdo.